ScreenLight: ဗီဒီယို Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုရိုးရှင်းစွာ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ScreenLight: Simplified ဗီဒီယို Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု
ScreenLight: Simplified ဗီဒီယို Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုဗီဒီယိုစီမံကိန်းကိုစာရွက်စာတမ်းများဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းပျောက်ဆုံးဒေတာကိုကြုံနေရ၏စိတ်ပျက်မှတဆင့်သွားကြပြီပြီငါတို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းတကယ်ပဲစီမံကိန်းကိုအောင်မြင်မှုတားဆီးနိုငျပုံကိုငါသိ၏။ ဒါဟာအဓိကပြဿနာထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ client ကိုအခြေစိုက်စခန်း, ကာယကံရှင်များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်သင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းထံမှလိုအပ်သောတုန့်ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိမအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်! အဟောင်းကိုစကားပုံ "တဦးတည်းတောင်းထဲ၌အားလုံးသင့်ရဲ့ကြက်ဥကိုစောင့်ရှောက်ကြဘူး" ဆက်ဆက်မ အသုံးမ စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ကမ္ဘာပေါ်မှာ! ဒါကြောင့်အားလုံးကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း said- ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ: ScreenLight, သင့်မီဒီယာဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲ, ဒါပေမယ့်လည်းနှငျ့သငျ, ရှိသမျှကိုသင်၏အီးမေးလ်တုံ့ပြန်ချက်များသင့်ရဲ့အထိခိုက်မခံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလုံခြုံ, သင့်အဖွဲ့သည်မှဝင်ရောက်ခွင့်များနှင့်ချောမွေ့နိုင်ပါတယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့တစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသော်လည်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီး-ဖန်တီးမသာတဲ့အစွမ်းထက် All-In-One tool ကို တစ်ကြော့မော့ပြီးလွယ်ကူလမ်းအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်!
တစ်ဦးကအခြေခံကဗီဒီယိုစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမြင်ကွင်းအသုံးချဖို့အခါ, ်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်: မီဒီယာ Upload လုပ်ပါ / သင်၏ video စီမံကိန်းကိုဖန်တီးပါ။ မှတ်ချက်: ဗီဒီယိုကိုအလိုအလျောက် transcoded သည်ကမည်သည့် device ကိုအပေါ်ပြန်ကစားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်! / စီမံကိန်း join ဖို့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါ။ ပြည်သူ့သာသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးအတိအကျအဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကစီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦးမှတ်ချက်များကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိကိုထိန်းချုပ်နိုင်, အခြားလူရဲ့မှတ်ချက်ရှုမြင်, ဖိုင်တွေ, သို့မဟုတ် download, ပိုင်ဆိုင်မှုများကို upload မှတ်စု: / သုံးသပ်ရေးညာဘက်အချိန်ဇယားအပေါ်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ထည့်ပါ။ ပြည်သူ့အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်နှင့်ဗီဒီယိုပြည့်စုံသည်အထိလုပ်ငန်းစဉ် Repeat / ရှေ့ဆက်စီမံကိန်းရွှေ့ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သို့သောအကြောင်းအပိုဆောင်းရှင်းလင်းချက်ရဖို့မှတ်ချက် reply နိုင်ပါတယ်။ တောက်ပ!
ယှဉ်ပြိုင်အများစုကျော် ScreenLight အသုံးချဖို့ရန်တဦးတည်းရဲ့အဓိကအားသာချက်လျှောက်လွှာ၏ရိုးရှင်းပါ! ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Asset Management တွင်တစ်ဦးငွီးငှေ့ဖှယျကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်လာ, သင်၏စီမံကိန်းကိုလျှင်နိုင်ပါတယ် အသင်းကပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအတွက်အိပ်မက်ဆိုးအောင်, Non-Tagged ဗီဒီယိုတစ်ခုအကြွင်းမဲ့အာဏာစပျစ်သီးပြွတ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်မှာရှိသမျှမဟုတ်! SoundCloud ၏မှတ်ချက်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူ Vimeo တူသောစားသုံးသူကိုဗီဒီယို tools များအသုံးပြုခြင်း၏လွယ်ကူခြင်း, အဘယ်သို့ ScreenLight သုံးကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာ၏ဒီဇိုင်းကိုသင့်ရဲ့အဖွဲ့ Desktop ပေါ်မှာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအပေါ်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ ဒီမှာ key ကိုသငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်မရွေး, မီဒီယာပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီးသင်တစ်ဦးလျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါရန်မလိုပါကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ကဲ့သို့အများအပြားစီမံကိန်းများ, ဗီဒီယိုမိနစ်န့်အသတ်အရေအတွက်ကလတိုင်း (မှတ်ချက်: သိုလှောင်မှုအာကာသခွင့်ပြု) ရှိနိုင်ပြီး, သင်သည်သင်၏သင်၏ workflow ခံစားစေသင့်စီမံကိန်းများနှင့်ဗီဒီယိုများစည်းရုံးနိုငျပါသညျ!
"ScreenLight အနေနဲ့အဆင့်မြင့် cloud-based ကိုဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် client နှင့်ထုတ်လုပ်သူများအချိန်ချွေတာ, စီမံကိန်းကိုမီဒီယာနှင့်တုံ့ပြန်ချက်အတူတကွညျြမနှောကြောင်းအတည်ပြုချက်ပလက်ဖောင်း, ငွေ, ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ " ပြောပါတယ် ခရစ် Potter, ScreenLight ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
၎င်းတို့၏ web-based ကိုဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ပလက်ဖောင်းများအတွက် ScreenLight အသုံးချကြောင်းလက်ရှိ Client ကိုစာရင်းနေသောခေါင်းစဉ်: York ကတက္ကသိုလ်, ယုဂျရုပ်ပုံများ, ကနေဒါရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာများ, Salesforce.com, Biscardi ကို Creative နှင့်ဒုတိယအစီးတီး။ အဆိုပါ ScreenLight ပုံပြင်ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်ဦးကဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်အဖြေရှာလို့မရဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တဦးတည်းကိုတည်လေ၏။ " ရစ်ချတ် Keating ခရစ် Potter နှင့်မာ့ခ် Tremblay ရစ်ချတ်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အယ်ဒီတာနဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး, သူ့ clients များနှင့်အတူဗီဒီယိုများသုံးသပ်တော်မူပြီးမှခဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ထွက်ထားကြ၏။ တစ်စီမံခန့်ခွဲမှုခေါင်းကိုက်တင်ဆက်ထားတဲ့ FTP ဆာဗာဖိုင်များကိုအပ်လုဒ်တင်စဉ် DVD ကို Screener ထွက်ပေးပို့ခြင်း, စျေးကြီးနှင့်အချိန်စားသုံးခဲ့ပါတယ်။ ကိုမလမ်းမျိုးစုံအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျ, ဖုန်းပြောဆိုမှုများနှင့်အစည်းအဝေးများကနေကွင်းဆက်များနှင့်ကြိုးတုံ့ပြန်ချက်အတွက်စီမံကိန်းကိုသင်တန်းသားများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကလွယ်ကူစေတော်မူ၏။ အဆိုပါရလဒ် ScreenLight, client များနှင့်အတူဗီဒီယိုများဝေမျှဖို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံလမ်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, အယ်ဒီတာများနှင့်အေဂျင်စီများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု, သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်စုဆောင်းဖြစ်ပြီး, ဗီဒီယိုများအတည်ပြုရ။ မှာသူတို့ကိုထုတ်စစ်ဆေး: www.screenlight.tv/
ScreenLight ဆက်ဆက်သင်၏ video စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အလွန်အမင်းအကြံပြုလျှောက်လွှာပါ! သူတို့ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်မှာ To-လလ-သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်ငွေတောင်းခံလွှာနှစ်ခုလုံးကိုဆက်ကပ်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျကိုအခမဲ့ 30 ရက်ပေါင်းများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုစမ်းနိုငျပါသညျ! ကိုသွားပါ: www.screenlight.tv/signup.html
အသံလွှင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု	2014-05-22
ယခင်: အသံလွှင့်အာရှ 70 မှာ Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း Introduces Cineline 2014 အရည်ဌာနမှူးနှင့် Air tripod စနစ်များအာရှစျေးကွက်မှ
နောက်တစ်ခု: Anton / Bauer က Litepanels နှင့် OConnor အဆိုပါရွှေ့အပေါ်အမေရိကန်များကင်မရာဦးစီးဌာနကိုသိမ်းဆည်းထားပါ